ओलीसँग यसकारण झस्किए प्रचण्ड !::Leading Nepal News
असार १४, काठमाडौं । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा भेट गरे । आफनो निवास कोटेश्वरबाट हिँडेका नेपाल बालुवाटार जानुअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार छिरे ।नेता नेपालले बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच भएको पछिल्लो कुराकानीको ब्रिफिङ लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरूलाई एक्लाएक्लै बोलाएर भेट्न खोजेपछि नेपाल शुक्रबार बालुवाटार जानुअघि दाहालसँगको कुराकानीको ‘स्पिरिट’ बुझ्न खुमलटार पुगेका थिए ।
एक दिनअघि (बुधबार) ओलीले दाहालसँग ‘धेरै वादविवाद नगरौं, मिलेर जाऔं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै प्रस्ताव ओलीले शुक्रबार नेता नेपालसँग पनि राखेका छन् । ओलीको मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव नेता नेपालले अस्वीकार त गरेनन् तर मिल्ने आधार, विधि, पद्धति र प्रक्रियाबारे उल्टै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । ‘तपाईं र म व्यक्तिको कुरा होइन, हामी कुन पद्धतिमा जाने हो, विधिअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने मुख्य कुरा हो, यसमा मिल्नुपर्‍यो,’ नेता नेपालले ओलीलाई शुक्रबारको भेटमा यस्तो जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेता नेपालले विगतदेखि नै पार्टीलाई पद्धतिअनुसार नचलाएको र सरकारमा पनि मानोमानी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने नेतामा अहिले दाहाल पनि थपिएका छन् । त्यसैले विगतमा ओलीसँग मात्र बढी निकट देखिने दाहाल अहिले नेपाल र ओलीलाई समदूरीमा राखेर हिँडिरहेका छन् । अहिले बालुवाटारमा ओलीसँग जति नै बाक्लो भेटघाट नेपाल र दाहालबीच पनि चलिरहेको छ । यसैसाता दाहाल र नेपालबीच कहिले खुमलटार त कहिले नयाँ बानेश्वरको अर्याल होटलमा लामा संवाद भएका छन् । कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–अघिल्लो शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई पार्टीको दस्ताबेजमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि अध्यक्ष दाहाल झस्किए । त्यही प्रकरणको बाछिटाले आन्तरिक एकता खल्बलिने शंका बढेपछि सातायता तीन मुख्य नेताबीच छुट्टाछुट्टै संवाद चलिरहेको छ । यो पनि पढ्नुहोस्…बाबुको काजकिरिया छोट्याएकोमा ५० हजार जरिवाना, समाजबाटै बहिष्कृत !
असार १४, सिरहा । तराई मधेसमा मृत्यु संस्कार गर्ने परम्परा लामो छ । झन् मधेसी समुदायमा त मृत्यु संस्कारमा आर्थिक भारसमेत पर्ने गरेको छ । आर्थिक भारमा कतिपय परिवार बिचल्ली भएको घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । पुरानो रुढीवादी संस्कारलाई विरोध गर्दै आएका पूर्वपत्रकार रामरिझन यादवले भने आफ्नो आमाको मृत्यु संस्कार छोट्याएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रेस सल्लाहकार थिए । लामो पत्रकारिता अनुभवसँगै उनले महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा प्रध्यापनसमेत गरे । आमाको मृत्यु संस्कार चार दिनमै सकेका यादवले समाजबाट के कस्ता सास्ती खेप्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुरेन्द्रकुमार कामतिको रिपोर्ट छापिएको छ ।
१३ दिन काजकिरिया नगरेकोमा समाजको विरोधसँगै उनी सामाजिक बहिस्करणमा परेका छन् । उनले गत निर्वाचनमा आफ्नै गाउँबाट मत पाएनन् । २०६९ सालमा बाबु विश्वनाथको मृत्यु भएको थियो । बाबुको मृत्यु कर्म पनि उनले चार दिनमै सकाएका थिए । काजकिरिया छोट्याएको र भोज नगरेको भन्दै सन्हैठामा यादव समुदायले उनलाई बहिष्कार गरेका थिए । जातबाटै निस्कासित गरे पनि आमाबाबुको नाममा उनले ‘जानकी विश्वनाथ प्रतिष्ठान’ नामक संस्था दर्ता गरी दुई लाख राशिको अक्षयकोष स्थापना गरे । भोजभतेरमा लाग्ने पैसा अक्षयकोषमा जम्मा गरी गाउँकै माध्यमिक विद्यालय सन्हैठाबाट वर्षेनी एसईई उत्तीर्ण गरी ११ कक्षा पढ्ने छात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।नेता यादवले बाबु विश्वनाथको मृत्युकर्म छोट्याएर भोजभतेर नगरेको भन्दै जातीय समाजले उनलाई ५० हजार जरिवानासमेत गरेको थियो । जरिवाना गरिएको पैसाले भोज गर्नुपर्ने गाउँलेको अडान रहे पनि यादवले भने सो पैसा अक्षयकोषमा जम्मा गरे । त्यसपछि गाउँले झन् आक्रोशित हुन पुगे ।
१ रुपैयाँमा ३ दाना स्याउ …
सेतो पुतली आतंकः शरीरको सम्पर्कमा आउनेवित्तिकै यसरी गुम्छ आँखाको ज्योती….